Gumi zvishuwo zvevatengesi muna 2018 | Ehupfumi Zvemari
Gumi zvishuwo zvevatengesi muna 2018
Kamwe zvakare gore rinotanga, 2018, iyo inogadzira kusava nechokwadi kwakawanda pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kuti zvimwe zviitiko zvigutsikane, nepo mune mamwe zvichizonyanya kunetsa nekuda kwezvavanofarira. Chero zvazvingaitika, ichave iri nzira ichafanira tarisana nazvo netariro. Iko imwe yeiyo zvinangwa zvekutanga Ichave inosanganisira kuita mari inobatsira pamwe nekugutsikana kuzere kwekutarisana nekushanda mumisika yequity.
Zvese izvi muchiitwa chakadai sa2018 icho chinotanga nerondedzero yemimvuri nezve izvo zvinogona kuitika mumatunhu epasi rose neepasi rose. Hazvishamisi kuti kune vanoverengeka vanoongorora zvemari vanofungidzira a Shanduko yemaitiro uye izvo zvinogona kutungamira mukurasikirwa kuiswa mukati mukufamba mumusika wemasheya. Ehezve, hazvizove nyore kwauri kuti usvitse zvaunoda zvinangwa kubva zvino zvichienda mberi. Iko kuchenjerera kunenge kuri kweanowanzo dhinomine pane ako ese zviito.
Chero zvazvingaitika, zvese zvinoita sekuratidza kuti iwe haugone kuwana maripoti emahara emakore apfuura. Kuti uwane zvinangwa zvakatemwa panguva ino, unenge usisina sarudzo asi kuva zvakanyanya kusarudza mumabasa akaitwa mumisika yemari. Izvo zvakare zvichave zvakakosha kwazvo kuti iwe uri mukuzara kukwana kwechikamu chakanaka chegore. Nekuti mikana yebhizinesi ichauya chero nguva. Pamwe paunenge usingatarisiri uye nekuda kweizvi uchafanira kupokana nemari yakakwana yemari zviwanikwa.
1 2018: kunonoka mwero kukwira
2 Kugadzikana muchirongwa cheEuropean
3 Kushaikwa kwekurwiswa nemagandanga
4 Kukura kwehupfumi hwepamusoro
5 Kugadzikana muchikamu chemafuta
6 Kugadzikana kwezvematongerwo enyika
7 Mhedzisiro yakanaka yebhizinesi
8 Kuenderera mberi kweiyo uptrend
9 Rongedza kupinda uye kubuda mitengo
10 Rombo rakanaka harimbokuvadza
2018: kunonoka mwero kukwira
Imwe yenyaya dzakanakisa idzo dzevashambadzi vadiki nepakati vanogona kuve gore rino nderekuti vanowedzera mazuva ekupedzisira kuti vatange kukwira kwemitero yezvibereko. Nekuti misika yemasheya inogara ichiuya inobatsira pavanenge vari pasi. Nezve iyo Federal Reserve yeUnited States (FED) zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti haufanire kumirira mwedzi yakawanda. Zvese zvinoratidza kuti chiyero ichi chinogona kushandiswa mukota yekutanga kana yechipiri yegore. Chero zvazvingaitika, kunonoka pakuonekwa kwayo kunogara kuri kugamuchirwa zvakanaka nevashambadzi vadiki nepakati.
Kana zvasvika kune iyo euro zone, fungidziro dzakanyanya kuomarara. Nekuti iyo European Central Bank (ECB) inogona kunonoka iyi hurongwa hwemari. Zvirinani kusvika chikamu chekupedzisira chegore rino rakaomarara 2018. Kunyangwe iko kuitirwa kwemari kubva kukondinendi yakare kwanga kusiri kukuru sekune rimwe divi reAtlantic. Iwe haugone kukanganwa izvozvo mitengo yemubereko yakaderera Ivo vanogamuchira kwazvo kuti iwe ugoisa mabhegi munzvimbo dzakakodzera kwazvo.
Kugadzikana muchirongwa cheEuropean
Pasina kupokana, iko kusimbiswa kweiyo projekiti yeEuropean ingangove imwe yenyaya dzakanakisa dzinogona kupihwa nevamiriri vakasiyana vezvemari. Mupfungwa iyi, iro basa rinozoitwa nenjodzi yezvehupfumi sezvazviri ichave yakakosha. Alemania. Kunyangwe paine kusahadzika kwakawanda pamusoro pemamwe matanho achatangwa kubva zvino zvichienda mberi. Kune rimwe divi, zvichave zvakafanira kuverengera mafambisirwo esarudzo anozoitika mukati megore ra2018. Ndiyo chaiyo ichaitirwa muItari, chimwe chakakosha kwazvo chinofanira kutarisana nacho. Kuti uone kuti ichatora nzira ipi muhukama hwayo neEuropean Union.
Kushaikwa kwekurwiswa nemagandanga
Kune rimwe divi, zvaizogamuchirwa kwazvo nevashambadzi vadiki nepakati. Iyo yaigona kudzima imwe yeakanyanya sosi yekusava nechokwadi kweEuropean equities. Pamusoro penyaya dzakanakisa kune vese vagari venzvimbo ino yenzvimbo. Kunyangwe hazvo zvaizoitika zvichinyatso kuganhurirwa uye nemhedzisiro inodzorwa, sezvakaitika gore rino ratichangodzinga. Ndekupi kuri chaizvo iyo Tourism chikamu chetsika vanotambura zvakanyanya kufamba uku. Nekukosha kwakanyanya kuderera nguva dzese dzezviitiko zvinotyisa zvinoitika. Chero zvazvingaitika, ivo havazove mafambiro anogara mazhinji ekutengesa zvikamu.
Kukura kwehupfumi hwepamusoro
Chimwe chinhu chinogadza misika yemari mu2018 pasina mubvunzo chichava kuwedzera kwehupfumi munyika dziri chikamu chenharaunda yeeuro. Chero kumusoro kutsauka kuchave kukwaziswa nekutenga nevatengesi. Kusvikira pakuti iyo ndeimwe yezvinyorwa zvekusimudzira musika wemasheya munguva ino ichangotanga. Wakatarisana nemamiriro ezvinhu aya, unenge usina imwe mhinduro kunze kwekunyatsoziva nezve shanduko yeiyi yakakosha paramende paramende. Mupfungwa iyi, idzi data dzinogona kumwe kushamisika kwakanaka kubva zvino zvichienda mberi.
Kugadzikana muchikamu chemafuta
Iko kushanduka kwegoridhe dema ichave imwe yemari midziyo iyo iwe yaunofanirwa kuziva nezvayo kubva zvino zvichienda mberi. Izvo hazvina kunaka, kana zvakadzika kwazvo kana mitengo yakakwira yemafuta. Sezvo ivo vachikanganisa zvakashata shanduko yeEuropean equities. Chikamu chakanaka chemberi chaizove yakakomberedza $ 45 dhiramu. Kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti kuwanda kwemitengo yemafuta kunobatsira kupinda kwako mumakambani emafuta. Sezvo ivo vaizoona mafambiro emitengo yezvikamu zvavo. Nematanho akakosha ekudzoreredza ayo angaite zvirinani kupfuura mamwe matunhu emusika wemasheya.
Kugadzikana kwezvematongerwo enyika
Nezvematongerwo enyika muSpain, hapana mubvunzo kuti zvaizogamuchirwa zvakanaka nevamiriri vese vezvemari, uko zvirokwazvo unosanganisirwa senhengo dzeboka remari. Kusvika pamwero iyo yaigona kubatsira equities ku kwira zvinzvimbo panguva yakanaka chikamu chemwedzi iyo iwe yaunotungamira pamberi pako kuita iyo kuchengetedza kunobatsira Kune kunyange mukana wekuti sarudzo yesarudzo ichaitika gore rino. Chinhu chingaunza nyonganiso mumisika yenyika yekuenzana. Nekudzikira kwakawanda mumatunhu ese uye izvo zvinogona kutenda kuti chirevo chako chemari mukupera kwegore chiri pachena chisina kunaka. Icho chinhu chaunoshaya sarudzo kunze kwekufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi.
Mhedzisiro yakanaka yebhizinesi
Sezvazvinoitika gore rega rega, uye neiyi pfungwa 2018 haigone kuve yakasiana, chimiro chaicho chemakambani akanyorwa chichava chakakodzera kwazvo kugadzira chero mhando marongero mukudyara. Kunyangwe iwe uchida kutora zvinzvimbo, kana mune zviitiko apo zvinangwa zvako ndezvekugadzirisa zvigaro munzvimbo dzakachengetedzeka. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuziva nezveakakosha aya data mukota yega yegore. Kusvika pakuti ivo vachakupa iyo isinganzwisisike chiratidzo nezve izvo zvaunofanirwa kuita kubva ipapo zvichienda mberi. Chero zvazvingaitika, pane kuderera kushoma mune bhizinesi zviitiko mumwedzi ichangopfuura. Kunyangwe ivo vachiri zvakakanganisa kukanganisa kushanduka kwemisika yemari. Iri zano harifanirwe kunge richishayikwa munzira dzeanenge ari mudiki uye wepakati-saizi investor.
Kuenderera mberi kweiyo uptrend
Hapana mubvunzo kuti chinhu chauri kunyanya kumirira mugore idzva iri ndechekuti zvinonzi kuchengetedza kuwedzera kumusoro kwemakore apfuura. Zviri nezve yakanakisa mamiriro kuitira kuti iwe urambe uchivandudza nzvimbo dzako mumusika wemasheya. Uye zvese vimbiso pane zviwanikwa zvemari zvaunowana mune angangoita mashandiro ako. Nekudaro, pane zviratidziro zvakakomba zvekuti chiitiko ichi hachizove chakaitika muna 2018. Muchiitiko ichocho, ingangoita mamiriro akaipisisa ane chekuita nenyika inogara yakaoma yemari. Iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekungwarira mune izvi. Ndiine chinangwa chikuru chekuchengetedza yako ese mari mipiro. Chero hupi hupfumi hwaunopa semudiki uye wepakati investor: ane hukasha, anochengetedza kana epakati.
Rongedza kupinda uye kubuda mitengo
Kana iwe haugone kukanganwa iyo yekupinda uye yekubuda nhanho muSpanish equities. Uye zvakare, chichava chiitiko chinoshanda kwazvo kunatsiridza chirevo chako chemari kubva ikozvino. Kwete pasina, iwe unenge uine tsika dze upside zvinogona zvakanyanyisa kukosha kupfuura pakutanga. Iko kuongorora kwehunyanzvi kuchabata chinonyanya kukosha kuti uzviite zvinobudirira. Kunyangwe kuti uzviite uine zvizere zvinovimbisa iwe unofanirwa kuve uine hukuru hwemari tsika. Kubva pakuona kwekushanduka kwemitengo muzviito.
Rombo rakanaka harimbokuvadza
Ichi chinhu zvakare chinoita basa rakakosha kwazvo kuti uyu 2018 ubereke kudzivirira zvaunofarira mumusika wemasheya. Kana iwe haugone kukanganwa kuti rombo rakanaka rinogona kuve mhedzisiro yekubatana kwakanyanya neiyo stock market chikamu. Zvekuti michero inogona kuve yakanaka kana nguva yasvika yekuita muyero wekupedzisira. Kunge kukoshesa zvese mu technical uye yakakosha ongororo. Ukasadaro, zvinokutorera mari yakawanda kuti uzadzise zvinangwa zvako. Chinhu chinozoratidzwa mune mhedzisiro yekuita kwako. Zvese zvinhu kuti zvikure nenzira kwayo unofanirwa kunge uchirangwa zvakanyanya paunenge uchigadzira marongero emhando ipi neipi. Zvekuti izvo zvaunoda mhedzisiro ndeyechokwadi nenguva yegore ra2018 painopera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Gumi zvishuwo zvevatengesi muna 2018
Mamiriro ezvinhu ehupfumi anokanganisa sei misika yemasheya yeSpain?
Tourism iri kuenderera mberi nekuyera padanho rehupfumi reSpanish